Warshada Elektarooniga | Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha ee Shiinaha
Qiimo wanaagsan 99.95% Lithium Hexafluorophosphate budada CAS 21324-40-3
LiPF6 waa baraf cad ama budo ah, oo lagu milmi karo biyaha kuna milmi karo dareeraha dabiici ah sida methanol, ethanol iyo carbonate oo leh dhibic dhalaalaya 200 ℃ iyo cufnaanta qaraabada 1.50g / cm3. Lithium Hexafluorophosphate waa qayb muhiim ah oo ka mid ah korontada, oo qiyaastii u dhiganta 43% wadarta qiimaha korontada. Marka la barbardhigo sida elektroolka ah sida LiBF4, LiAsF6 iyo LiClO4, lithium hexafluorophosphate wuxuu leeyahay faa iidooyin dhanka kala-miirnaanta, iswaafajinta, badbaadada iyo ilaalinta deegaanka ee dareeraha dareeraha, hadana waa milixda ugu badan ee la isticmaalo.
Nadiif sare 99% Fluorinated Graphite CAS 11113-63-6 Fluorographite
Fluorographite waxaa loo isticmaalaa inay tahay maadada cathode ee baytariyada lithium-fluorocarbon, marka la eego heerka dheecaanka ee C / 10, waxaa lagu dabaqi karaa nooca tamarta, nooca awoodda iyo baytariyada heerka dheecaanka heerka sare ah.
Mashruuca soo saarida nooca fluorographite ee tamarta ayaa la mid ah ama ka weyn 2.5V, awoodda gaarka ah ee nooca fluorographite ee tamarta ayaa ka badan 800mAh / g iyo tamarteeda gaarka ah waxay ka badan tahay 2000Wh / kg, taas oo ah nooc ka mid ah qalabka cathode oo aad u fiican waxqabadka lithium Battery Primary.
Barxadda soosaarka ee nooca fluorographite-ka ayaa ka siman ama ka weyn 2.8V, awoodda gaarka ah ee nooca fluorographite-ka ayaa ka badan 700mAh / g tamarteeda gaarka ahna waxay ka badan tahay 1900Wh / kg.
Warshadaha / Elektronikada darajada TMAH 25% Tetramethylammonium Hydroxide cas 75-59-2
Magaca Kiimikada: Tetramethylammonium Hydroxide (TMAH)
Nooca: 25% TMAH (xalka); 99% TMAH (budo)
99% Fluorographene CAS 51311-17-2 Graphene foloraydhka
Fluorographene waa wax muhiim u ah soosaarida graphene. Marka loo barbardhigo graphene, fluorographene waxay haysay qaab dhismeedka lamellar ee graphene in kasta oo atamka kaarboonka laga soo koobay sp2 ilaa sp3.
Natiijo ahaan, fluorographene ma laha oo kaliya aag gaar ah oo ballaaran, isla waqtigaas oo ay sabab u tahay soo bandhigida atamka fluorine, tamarta dusha sare ee graphene si weyn ayaa loo dhimay, hantida hydrophobic iyo oleophobic aad ayaa loo xoojiyay, halka xasilloonida kuleylka, kiimikada xasilloonida iyo iska caabbinta daxalka ayaa si weyn loo hagaajiyay. Sababtoo ah astaamaheeda gaarka ah, fluorographene waxaa si weyn loogu isticmaali karaa aagaga saliida lidka-duugga, heerkulka sare ee dahaadhka u adkeysanaya, isla mar ahaantaana, bandgap-keeda oo ballaaran awgeed, fluorographene waxay leedahay rajo codsiyo aaladaha nano-elektarooniga ah, aaladaha sawir-qaadaha , aaladaha heerkulka korantada iyo beero kale.
Qiimo wanaagsan 99.9% Lithium Tetrafluoroborate LiBF4 CAS 14283-07-9
Lithium Tetrafluoroborate (LiBF4) waa budo cad ama waxyar huruud ah, si fudud biyaha ugu milmi kara, waxay ku milmi kartaa karbonatka dareeraha iyo ether xeryahooda, waxay leedahay dhibic dhalaalaysa oo ah 293-300 ° C, iyo cufnaanta qaraabada ah ee 0.852 g / cm3. Litetraum tetrafluoroborate wuxuu leeyahay xasillooni kiimikaad oo wanaagsan
iyo xasiloonida kuleylka, waxaana badanaa loo isticmaalaa sidii wax lagu daro nidaamka korantada ee ku saleysan LiPF6 si loo hagaajiyo nolosha wareegga loona hagaajiyo waxqabadka baytariyada ion lithium.
Ka dib markii lagu daro LiBF4 korantada, kala duwanaanta heerkulka shaqada ee batteriga lithium ion waa la ballaadhin karaa, waxqabadka dheecaanka sare iyo hooseeya ee batteriga waa la horumarin karaa.
Qiimo wanaagsan 99% Fluorographite CAS 11113-63-6
Waxyaabaha Fluorocarbon waa nooc ka mid ah maaddooyinka fluorocarbon ee shaqeynaya oo leh sifooyin gaar ah.
Waxaa si aad ah loogu isticmaalay sifaynta adag, ilaalinta daxalka iyo ka hortagga xajmiga, maaddada ololka celisa, dhexdhexaadiyaha falceliyaha nukliyeerka iyo baytariyada Li-CFx sababtoo ah mudnaanta tamarta dusha sare leh, xasiloonida kiimikada ee wanaagsan, adkeysiga kuleylka iyo awoodda gaarka ah .
Qiimo wanaagsan 99% Perfluorooctane CAS 307-34-6
Perfluorooctane (C8F18) wuxuu leeyahay bar dhalaal ah -25 ℃ iyo dhibic karkaraya 103 ℃. Waa mid aan ololi karin, aan sun lahayn, kiimiko ahaan aad u deggan oo aan midab lahayn. Perfluorooctane laguma milmi karo biyaha, ethanol, acetic acid iyo formaldehyde, laakiin waa lagu milmi karaa ethyl ether, acetone, dichloromethane, chloroform iyo fluorochloroalkane. Perfluorooctane waxay leedahay xiisad hoose oo dusha sare ah, xoog dielectric sare, iska caabin kuleyl aad u fiican iyo heerkulka burburka oo ka sarreeya 800 ℃ Perfluorooctane waxay kala diri kartaa xaddi badan oo oksijiin ah iyo kaarboon laba ogsaydh, waxaana loo isticmaali karaa iskudhafyada kale ee fluorocarbon sida dhiig macmal ah iyo dheecaanka ilaalinta xubnaha jirka.
Qiimo wanaagsan Perfluorodecalin CAS 306-94-5
Perfluorodecalin (C10F18), oo sidoo kale loo yaqaan octadecfluorodecalin ama perfluorodecalin (decalin), waa nooc ka mid ah dareeraha perfluorocarbon oo leh dhibic dhalaalaysa -10 ° C iyo dhibic karkaraya 140 ° C. Waa dareere aan midab lahayn oo hufan.
Ultramacemulsiga kolloidhka ah ee ka kooban perfluoronaphthalane iyo perfluorocompounds kale, sida dhiig macmal ah, wuxuu leeyahay awood wanaagsan oo oxygen-qaadis ah. Feejignaan gaar ah iyo cadaadis qayb oo ogsajiin ah, soodhaweynta oksijiinta waa 20 jeer oo biyo ah iyo 2 jeer ka sareeya kan dhiigga.